Jaappaan Afrikaatti oomishni ruuzii dachaan akka guddatu gargaaruuf - BBC News Afaan Oromoo
Jaappaan Afrikaatti oomishni ruuzii dachaan akka guddatu gargaaruuf
29 Hagayya 2019
Image copyright Prime Minister Office
Goodayyaa suuraa MM Abiyi Ahmad fi MM Jaappaan Shiinzoo Abee
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiyi Ahimad yaa'ii idila addunyaa dhimma misoomaarratti mariyatu 'Tokyo International Conference on International Development (TICAD) marroo 7ffaaf taa'amu hoggantoota biyyoota Afrikaa biroo wajjin hirmaatan.
Yaaa'ii kanarratti MM Abiyi foyya'iinsa karaa dinagdee fi siyaasaa biyyatti raawwatamaa jiru Shinzoo Abee wajjin wayita mariyatan ibsan.
Fooyya'iinsi kunis guddina biyyattii cimsuun biyyoota Afrikaa diinagdeen dursan shan keessaa tokko akka ta'uu dandeessuf akka barbaadan Abeetti himan.
Lammileen Jaappaaan Itoophiyaatti karaa hojiiwwan inveestimeentii, albuuda baasuu, teekinolojii odeffannooo (ICT), qonnaa fi turizimiitiin irratti akka hirmaatan MM Abiyi waamicha dhiyeessan.
Kana malees, biyyattin carraa hojii dargaggoota ga'uumsa qabaniif biyyatti akka mijeessitus gaafatan.
Ministirri muummee Jaappaan Kooriyaa Kaabaaf falan barbaada jedhan
MM Abiy turtii Kooriyaa Kibbaa xumuruun gara Jaappaan qajeelan
Ministirri Muummee Jaappaan Shinzoo Abeen jijjirama biyyatti keessatti dhufe akka deeggarani fi waliigaltee nageenyaa Sudaanitti mallatteffame keessatti gumaacha qabanii fi Ertiraa wajjin walii galtee nageenyaa mallatteeffamee eeraniiru.
Kana malees, marii hoggantoonni Afrikaa hirmaachiseeratti Jaappaan oomisha ruuzii Afrikaa dachaan akka dabalu beeksifte.
Jaappaan Afrikaatti oomisha ruuzii bara 2030tti dachaan dabaluuf akka deeggartu yaa'ii hoggantoonni Afrikaa magaalaa biyyatti Yokohamaatti hirmaatanirratti himte.
Ministirri Muuummee Jaappaan Shinzoo Abeen konfiraansii idila addunyaa guddiinaa Afrikaa xiyyeeffatuTookiyootti ta'aamerratti teekinolojiifi kalaqaan akka karoorichi milkaa'uu akka deeggartu himan.
Karoorri kun toonii mil 50 ardiin Afrikaa akka oomishu deeggara. Africa Development Bank (AfDB) sagantaa kana akka deeggaru himameera.
''Qonnarratti bu'aan argame jiraatullee, beela addunyaarraa balleessuun hin danda'amne. Waliin kaanee beela akka addunyaatti jiru goolabuu qabna.
Kana dalaguuf beela Afrikaa goolabuuf dirqama qabna. Beelli namummaa keenya xiqqeessa,'' jedhan Pirezedantiin Baankii Misooma Afrikaa Akinwaanii Adiseena.
Akka gabaasni wabii nyaataa Dhaabbata biyyoota gamtoomanii barana dhiyeesseetti, bara darbe namoota miiliyoona 250 Afrikaatti beela'e.
Jaappaan Baankii misooma Afrikaa wajjin oomisha qonnaa fooyyeessuun qonnaan bultoonni ilaalcha nyaataaf oomishuu gara gabaatti gurguruutti jijjiraa jedhan.
Goodayyaa suuraa Naajeriyaan oomisha ruuzii guddisuuf hojjataa jirti
Lakkoofsa uummataa guddaa qabaachuun biyyoota Afrikaa kan dursitu Naayijeriyaan, bara 2015 irraa kaasee oomisha ruuzii dabaluuf yaalaa akka jirtu Pirezidanti Mohaammaduu Buhaariin himuun, ruuzii biyyoota biroorraa akka hin bitne himan.
Imaammanni biyyattii garuu qonnaan bultoota naannichatti humna oomisha hin qabne tilmaama keessa otoo hin galchiin hafuufi biyyoota ollaa akka Beeniin irraa karaa seeraan alaa tooniin hedduu akka seenu himameera.
Barreessaan Firaans Yaan Moo'iks ''dubartoonni 50 dabarraan jaalalaaf baayyee dulloomu'' jedhe
Riiformiin MM Dr Abiy Ahmad garaagarummaa saboota gidduu jiru saaxile
Tiraamp yaalii misaa'ela Kooriyaa Kaabaa 'meshaalee waraanaa xixiqqaadha' jedhan
''Ijoollee 35 fi maatii 25'n qaba garuu homtuusaanii kan koo miti''
'Itoophiyaaf fiiguf hawwee hin beeku'
ABO dabalatee dhaabbileen siyaasaa sagal walta'an